အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: အင်တာနက်မယ်..အဖေါ်အချွတ်မယ်..ဘာဘာညာညာမယ်…အလန်းဇယားမယ်..များ သတိပြုရန် ပေးစာ
ယနေ့ လူငယ်အများစု အင်တာနက် သုံးကြ၏..။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း လောက်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်များအသုံးပြုလာကြပါတယ်..။အရင်က အင်တာနက်ကို ဆိုင်တွေမှာအသုံးပြုကြရလေသည်..။ယခုကဲ့သို့ ဖုန်းဖြင့် ကိုယ်တိုင်သုံးသူ ရှားပါးလှ၏..။
၂၀၀၄ ၀န်းကျင်လောက်တွင် ..နက်ပေါ်တွင် ဘာတွေခောတ်စားလာသလဲဆိုတော့ ဘူလေးလဲ ..အဲ့ဒါဘူလေးလဲ…။အမှန်လေးပါတဲ့ ------ လန်နေပြီ..။ဂေါ်မစွံတဲ့ ကောင်မ အရမ်း---- တယ်ကွာ စသဖြင့် ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်..။ကျောင်းသား/သူ များ ၄တန်း ၅ တန်းလောက်မှ စတင်ကြည့်ဖူးကြလေသည်..။ လက်ရှိအခြေအနေများတွင်တော့ ဗွီဒီယိုဖိုင်မျိုးစုံ..အလန်းဇယားမျိုးစုံ..အခန်းဆက် part(1/2/3/4) စသဖြင့် စသဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာ ရှင်းလင်းပေါ်လွင်စွာ ပျံနှံလာခဲ့ပါသည်..။ကိုရီးယားကားများကို ကြည့်ကာ အတုမြင်အတတ်သင်မှားကြ..။ကိုယ်တိုင် နာမည်ကြီးချင်လို့ lotion လိမ်းသူရှိသလို အဆင်မပြေလို့ နက်ပေါ်တင်ခံရသူတွေ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ထိ လိုက်ပြီး ဖေါ်ချွတ်ကာ အလှပြသူတွေအပြင် မော်ဒယ်လောက အနုပညာလောက အဆိုတော်လောက(အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) အနေအထိုင်မတတ်သူများကိုဆိုလိုပါသည်..။
နာမည်ကြီးချင်တော့ သူ့ထက်ငါ တိုကြ ..ကွဲကြ.. ဖြဲကြ ..ကုန်းကြ… ကွကြ ..ဖေါ်ကြ …ချွတ်ကြ …အမျိုးမျိုး ပိုစ့်ပေးကာ အရှုစားခံကြ အသုံးတော်ခံကြလေသည်..။ နောင်တွင် ဘာတွေထပ်ဖြစ်လာမည်ဆိုတာ သူတို့မတွေးမိကြ..ပေါ့ပေါ့ လေးဘဲ သဘောထားကာ အဆင်ပြေသလို နေ ကြလေသည်..။စာဖတ်သူများ စဉ်းစားနိုင်စေရန် အတွေးအမြင်တစ်ခု တင်ပြပါရစေ..။ ဆိုကြပါစို့ အင်တာနက်တွင် မဟုတ်က ဟုတ်ကပုံများ ဗွီဒီယိုဖိုင်များတွင် ပါလာသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ ရှေးရေးကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်…အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် တစ်ချိန်တွင် သား/သမီး ရလာမည်..၊ မွေးထားသော သားသမီးများ အရွယ်ရောက်လာမည်..၊ သမိုင်းကအဲ့ဒီမှာ စပြီ.. သူ၏ သားသမီးများ ပညာသင်ကြားချိန်တွင် မသိလိုက်မသိဘာသာ နေခဲ့ လုပ်ခဲ့ ကဲခဲ့တဲ့ အရိပ်မည်းသည် ထိုကလေးငယ်တို့၏ (ပညာရေး ကျန်းမာရေး လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး) တို့ကို များစွာ ထိခိုက်နစ်နာစေပါမည်..။နောင်တွင် ၄တန်း ၅ တန်း ခလေးများပါ ဖုန်းများ ကိုယ်စီ ဖြစ်လာချိန်တွင်…သူ့သူငယ်ချင်းများ မှ ဖုန်းတွင် Bluetooth ဖြင့် အပြန်အလှန် ပုံများ ဗွီဒီယို ဖိုင်များ အချင်းချင်း ဖလှယ်ကြပေလိမ့်မည်..။အရင်က နေချင်သလိုနေ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့ ဂရုမစိုက်ခဲ့သမျှ မိမိ သား/သမီးများ မိမိ၏ မတော်တရော် ပုံ /ဗွီဒီယိုဖိုင် ကို တွေ့ပါက ..၊ မွေးထားသော သားသမီး လူဘုံ အလယ်တွင် ဘယ်လို မျက်နှာပေးဖြင့် နေမည်လဲ..။ကိုယ့်သားသမီး ကအဲ့ဒီ မတော်တရော် ပုံပြန်ကြည့်ပြီးတော့ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုံ.။ဖလန်း ဖလန်းတွေထနေပါက ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ..။ ကျောင်းတွင် ဘယ်လို ပညာ သင်ကြားမလဲ .. စသဖြင့် စသဖြင့် နောင်ဖြစ်လာမည့် အကျိုးဆက်များကို အမျိုးသမီးထု များ ဆင်ခြင်သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါစေ.. ကိစ္စက အဲ့ဒီမှာဘဲ ပြီးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ..အဲ့ သားငယ် သမီးငယ် များ အိမ်ထောင်ပြုချိန် ထိလိုက်အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်..နောင် မြေး မြစ်ထိ လိုက်ပါနေမည်ကို သတိပြုမိကြပါစေ..။ အဲ့တော့ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ရဲရဲတင်းတင်း ဖေါ်နေကြသူတွေ အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေကြည့်ကြပါ..။ သင်၏ အမြင်မတော် ပုံများ ဗွီဒီယိုဖိုင်များ ကို သင်၏သား/သမီးများ မိဘ ဆွေမျိုးများ မြင်တွေ့ပါက မည်သို့ခံစားရမည်ကို တွေးမိပါသလော…။ အရွယ်ငယ် သေးတော့ creazy ဖြစ်မယ်ထင်လို့ ပုံစံအမျိုးမျိုး ၊ ပို့စ်အမျိုးမျိုး ဖြင့် တိုထား ဖေါ်ထားပြီး အသုံးတော်ခံနေတာကို သင့်အိမ် ဧည့်ခန်းထဲ လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာ သင် ချိတ်ရဲ့ပါသလား..။ သင်က ပုံတစ်ပုံ ဗွီဒီယို ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို အရိုက်ခံ အတင်ခံလိုက်တာ ပေါ့ပေါ့လေးဘဲ တွေးမိတယ် .ဘယ်အချိန်ထိ အဲ့သမိုင်း ပျောက်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ..။လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅၀ ကျော်..လွပ်လပ်ရေးမရခင်ထဲက ပုံတွေ ခုချိန်ထိ နက်ပေါ်မှာ အသက်ဝင်ရှင်သန်နေတုန်း ဘဲဆိုတာ သတိပြုဆင်ခြင်ပါ..။ သင် ဖေါ်လိုက် ချွတ်လိုက် တိုလိုက် လို့ သင့်ဘ၀ အောင်မြင်မှုများစွာ ပြောင်းလဲသွားတယ်ထင်ပါသလား..။ ယနေ့ ခောတ် တွင် ပုံတစ်ပုံ ဗွီဒီယို တစ်ဖိုင် အချိန်တိုတို အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး ပျံနှံနိုင်သည်ကို သတိပြုမိပါသလား။ ကဲဗျာ အဲ့ဒီတော့ အချိန်မနှောင်းခင် ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကို ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေဖို့ ဒါလေးတွေ သတိပြုကြပါ.. တစ်ချိန်က နံရံမှာ နားရှိသည်ဟု ဆိုကြသုံးနှုန်းကြသလို..။အခု နေရာတိုင်းတွင် ကင်မရာရှိနေတယ် ဆိုတာ သတိပြုပါ.။ အိမ်က အပြင်ထွက်မည်ဆိုတာနှင့် လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်ဆင်ပါ..။သင် အနေနဲ့ တိုထား ဖေါ်ထား ခွဲထား ဖြဲထား ပြီး အပြင်ထွက်ပါက သင်သတိလစ်အငိုက်မိချိန် သင့်ပုံ ဓါတ်ပုံအဖြစ် အင်တာနက်ပေါ် အချိန်မရွှေးရောက်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ..။ >နေရာတိုင်း တွင် ကင်မရာရှိသည်ကို နှလုံးသွင်းထားပါ .. စားသောက်ဆိုင် ရုပ်ရှင်ရုံ အရောင်းစင်တာ ကားဂိတ် စာသင်ခန်း အ၀တ်လဲခန်း ပန်းခြံ. လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် ကင်မရာများ တတ်ဆင်ထားသည်ဟု သဘောပေါက်ပါ..။ တစ်ချိန်က မသိလိုက်မသိဘာ မှတ်တမ်းတင် ထားသော မိမိ မတော်တရော် ပုံများ ရှိနေပါက ယခုကစပြီး ချက်ခြင်း ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ..။ဘယ်မှာထားထား မလုံခြုံနိုင်ပါဘူး..။ကွန်ပျူတာ ဖုန်း tablet . I ped. Strick .CD. DVD.ဘယ် နေရာမှာသိမ်းထား သိမ်းထား လုံခြုံမှု မရှိဘူးဆိုတာကို သတိရပါ..။
သင်္ကြန် ..new year .ချစ်သူများနေ့ စသောရက်များတွင် ပွဲလန်းသဘင်သွားရင်း သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆုံကာ သောက်စားမိရင်း သတိလက်လွတ် ဖြစ်နေချိန် သင့်ပုံ အင်တာနက်ပေါ် ရောက်သွားနိုင်ချေ ရာနှုန်းပြည့် ရှိနေတယ်ဆို တာ သတိပြုပါ..။ အမျိုးကောင်း သားများအနေဖြင့် လည်း မိမိ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ပုံအား site မျိုးစုံ သို့ ပေးပို့လျှက်ရှိနေကြသည်..။သူငယ်ချင်း ယောက်ကျားလေးများ စုဝေးမိပါက ဘီယာဆိုင် အရက်ဆိုင် ထိုင်ကာ အလန်းဇယားပုံများ အချင်းချင်း share ကြလေသည်..။ဒါက part 1.ဒါကတော့ ရှယ်..။ဒါလေးက ဘယ်လို နောက်ဆုံးပေါ်ဘယ် site က down လာတာ စသဖြင့် မရိုးနိုင်အောင် အဲ့လောကမှာ တွင်ကျယ်လျှက်ရှိကြပါတယ်..။ထို့နောက်မှာတော့ ရေချိန်လဲရ မူးလာတော့ A plan ..B plan အနေဖြင့် မာဆတ် မာစွတ် KTV စသည့် နေရာမျိုးစုံ ရောက်ကျလေ၏..။ရောက်ပြီး သကာလ ငြိမ်ငြိမ်မနေဘဲ ဖုန်းဖြင့် ခိုးရိုက်ကာ ဟိုတင် ဒီတင် တင်ကြလေ၏..။အတင်ခံရသူ မှာ များစွာ သနားဖွယ်ကောင်းလေစွ..။တစ်နေရာတွင် ဖတ်ဖူးတယ်.. အဲ့ကမိန်းခလေးတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံက(သူတို့က ဒီလိုတင်တော့ ကျမတို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် သတ်သေချင်စိတ်ပေါက်တယ်..ရပ်ကွက်ရုံး မှာ ဓါတ်ပုံ ကပ်လိုက်ရင် တောင်မှ ကိုယ့် ရပ်ကွက် တစ်ခု မသကာ ဘေးရပ်ကွပ်တွေ လောက်ဘဲ သိမယ်..။
အင်တာနက် ပေါ်တင်လိုက်တော့ ကိုယ့်တစ်နိုင်ငံလုံး သာမက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ အမျိုး တွေ တောင်သိကုန်ကျတယ်တဲ့ .).။ဘယ်လောက်များ ရင်နာဖွယ် ရင့်နင့်ဖွယ်ကောင်းလိုက်ပါသလဲဗျာ..။ site တွေ fb နဲ့ အခြား web page တွေမှာ ကိုယ့် မြန်မာ အမျိုးသမီး မတော်တရော် ပုံ တင်နေကြသူများ ကိုယ်ချင်းစာတရားထားနိုင်ကြပါစေ..။အဲ့လို တင်လို့ ကိုယ့် လူမျိုး ဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်လား အနှိမ်ခံရမလား ဆိုတာ အဖြေရှိပြီးသားပါ..။အခုလို ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မွတ်တွေနဲ့ ပြသနာပေါင်း ၁၆၀၀၀ လောက် တတ်နေချိန်မှာ ပိုပြီး ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်..။သူတို့လူမျိုးမှာ ကိုယ့် ဘာသာဝင် အချင်းချင်း ရှက်ဖွယ်ကောင်းမဲ့ ကိစ္စကို လူမသိ သိအောင် လုပ်တယ် ဖွတယ် အင်တာနက်ပေါ် မရောက်ရောက်အောင်တင်တယ် ဆိုတာ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ရှားပါတယ်..။အလကားနေရင်း ငါတို့ အမျိုးသမီးလေးတွေက ဒီလိုဘဲ ၀တ်တတ်စားတတ် နေတတ် ဆိုတာနက်ပေါ်တင်ရင်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းနေသလိုဖြစ် နေပါ တယ်..။ဘာသာတိုးတက်အောင် လုပ်နေတဲ့ ၉၆၉ အဖွဲ့ မှလည်း ကုလားဆိုင်မှ ဈေးမ၀ယ်ဖို့ ကိုယ်ဘာသာဝင်အချင်းချင်း သာအိမ်ထောင်ပြုကြဖို့တွေအပြင် အခုဖေါ်ပြနေတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း အရှက်သိက္ခာမဲ့တဲ့ ပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်တင်ပြီး မဖွကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပေးစေလိုပါ တယ်ခင်ဗျာ… အားလုံးကိုလေးစားလျှက်…
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:06 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook